Trace: • somali
KU BIIR XISBIGA VEGAN.
Waa maxay macnaha noqoshada vegan?
Noqoshada Khudradda (vegan) waxay ka dhigan tahay sida ugu macquulsan uguna macquulsan, inaanan marnaba waxyeeleyn xayawaanka.
Waxaan ka soo horjeednaa taageerida howlaha ku lug leh gawraca xoolaha ama dhiig-miirashada sababo aan muhiim ahayn.
Falsafada vegan & diiradda siyaasadeed.
Dadka vegan waxay ka soo horjeedaan noolaha, kaluumeysiga, ugaarsiga, dabin iyo dhaqashada xoolaha, gaar ahaan beeraha xoolaha ee warshadda.
In kasta oo ay u ololeeyaan dadka u ololeeya xuquuqda xayawaanka, haddana xayawaanku weli bani'aadamku wuxuu uga faa'iidaystaa dano gaar ah
Xisbiga Vegan wuxuu doonayaa inuu ka ilaaliyo xayawaanka nolosha addoonsiga iyo dhimashada si ay u noqdaan cunto.
Waxaan aaminsanahay xoriyada dhamaan noolaha & inagoo adeegsanayna veganism-ka aan ku badali karno anaga oo u wareejinayna lacag taas oo hadii kale waxyeelo u geysan karta xayawaanka si loogu badalo vegan.
Waxaan u abuurnay Xisbiga Khudradda (vegan Party) si qofkasta uu u horumariyo una faafiyo khudradda.
Uma baahnid inaad isqorto, kaliya guji edit & isku day.
Dhammaan wax ka beddelka lagu sameeyay boggan waa qarsoodi, fadlan la soco in qof kasta uu tafatiri karo bogga HTML isla markaana uu koodheyn karo baarayaashooda ama ka faa'iideysigooda, haddii aad wax dembi ah ka hesho fadlan soo sheeg, haddii aad rabto in wax ka beddelkaagu uu muujiyo magacaaga adeegsiga fadlan abuur koonto.
Waad daabacan kartaa boggaga anon ama waxaad ku sameyn kartaa wax ka beddelka anon xisaab ama xisaab la'aan, nidaamkeenu wuxuu kaydiyaa IP-ga dhammaan tifaftirka si gaar ah & si joogto ah ayuu u baabi'iyaa, ma dhiirrigelinno waxyaabo aan vegan ahayn & mararka qaarkood boggaaga ayaa si aan kala sooc lahayn u tirtiri karaa ama u beddeli karaa xitaa haddii uu yahay vegan .
Bogaggan waxaa ku jiri kara waxyaabo aan weli la dhexdhexaadin, fadlan xor u ahaw inaad dhexdhexaad ka dhigto wax naftaada.
Dadka vegan ma cunaan hilib, ma cabaan caano xayawaan, ma cunaan ukunta xayawaanka ama ma cunaan malab shinni ah, veganku ma iibsadaan dhogor dhab ah ama maqaar.
Veganism waa dhaqanka ka fogaanshaha isticmaalka wax soo saarka xoolaha, gaar ahaan cuntada, iyo falsafada la xiriirta ee diidaysa heerka badeecada xoolaha.
Shakhsiga raaca cuntada ama falsafadda waxaa loo yaqaan 'Vegan'.
languages/somali.txt · Last modified: 2021/03/21 22:30 (external edit)